နှစ်ပတ်လည် - ဝီကီပီးဒီးယား
"နှစ်ပတ်လည်ရတု" ကို ဤနေရာသို့ ညွှန်းသည်။ ကဗျာအလင်္ကာ အတွက် ရတု တွင်ရှုပါ။
နှစ်ပတ်လည်ဆိုသည်မှာ ရှေ့နှစ်ခါက အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ဖြစ်ပွားသော၊ သို့မဟုတ် တက္ကသိုလ် တစ်ခုခု တည်ထောင်သော ရက်စွဲဖြစ်ပြီး၊ ထိုအဖြစ်အပျက်ကို ချီးမြှောက်လို၍လည်းကောင်း၊ သတိရတမ်းတရ၍ လည်းကောင်း ရည်ညွှန်း ပြုလုပ်သည်။ ဥပမာ၊ ဖြစ်စဉ် တစ်ခုသည် စီစဉ်ထား၍ ဖြစ်စေ၊ မမျှော်လင့်ဘဲ ဖြစ်စေ ပထမဦးစွာ ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့မှစ နောက်တစ်နှစ်ကြာသော် ထိုဖြစ်စဉ်၏ ဦးဆုံးသော နှစ်ပတ်လည် ဖြစ်လာသည်။ ထိုစကားလုံးကို သူတော်စင်များကို ဂုဏ်ပြုဧည့်ခံသော ကက်သလစ် စားပွဲများတွင် ပထမဆုံး စတင်သုံးနှုန်းလာသည်။
တိုင်းပြည်‌အတော်များများတွင် စံအားဖြင့် နိုင်ငံတော်နေ့ဟု ခေါ်သော နိုင်ငံတော်နှစ်ပတ်လည်များ ဆင်ယင်ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနေ့ သို့ ဖွဲ့စည်းပုံသစ် ပေါ်ပေါက်သောနေ့ သို့ အမျိုးသားနေ့ စသည်တို့ ဖြစ်နိုင်သည်။ လက်ရှိနန်းစံဘုရင်အတွက် အရေးပါသော နေ့ရက်များကိုလည်း ပွဲလမ်းသဘင် ဆင်ယင်ကျင်းပမည်သာ ဖြစ်ပြီး၊ မကြာခဏ ဂျူဘလီ (Jubilee)ဟု ညွှန်းသည်။
၁.၁ လက်တင်ဘာသာမှ ဆင်းသက်သော ဂဏန်းစဉ် အမည်များ
မွေးနေ့များသည် တစ်စုံတစ်ယောက် မွေးဖွားသော နေ့ကို အောက်မေ့ ဂုဏ်ပြုသောအခါ အများဆုံး ပြုလုပ်သော နှစ်ပတ်လည် အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တရားဝင် မွေးနေ့တွင် မကျင်းပဖြစ်ဘဲ နောက်ဆုတ်၍ ဖြစ်စေ၊ ရှေ့တိုး၍ ဖြစ်စေ ကျင်းပရသည်လည်း ရှိသည်။
မင်္ဂလာ‌နှစ်ပတ်လည်ကို မင်္ဂလာဆောင်သော နေ့ရက်အတိုင်း မကြာခဏ ကျင်းပလေ့ရှိသည်။
သေဆုံးနှစ်ပတ်လည်ကို ဥပမာ ဦးဘသူ ၂ နှစ်ပြည့် ၃ နှစ်ပြည့် စသည့်ဖြင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၌ ဆွမ်းကျွေးကာ အထိမ်းအမှတ် ပြုလေ့ရှိသည်။
Dies natalis (birth day)ဆိုသော လက်တင်စကားစုသည် စာအားဖြင့် မွေးနေ့ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပြီး၊ ဘာသာစကား အတော်များများ၌ မွေးစား စကားလုံး ဖြစ်လာကာ၊ အထူးသဖြင့် ပညာရေး အသိုင်းအဝိုင်းတွင် တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုကို စတင်တည်ထောင်သည့်နှစ်မှ စ၍ မိခင်ကျောင်း (‌alma mater) တည်ထောင်ခြင်း အနှစ် ၃၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် စသည့်ဖြင့် ဆင်ယင်ကျင်းပလေ့ရှိသည်။
နိုင်ငံများ၏ နှစ်ပတ်လည်နေ့များကို ရောမဂဏန်း၊ သို့မဟုတ် လက်တင်စကားလုံးများနှင့် ဖော်ပြပြီး၊ ကုန်လွန်သွားသော နှစ် အရေအတွက်ကို မှတ်သားကြသည်။
လက်တင်ဘာသာမှ ဆင်းသက်သော ဂဏန်းစဉ် အမည်များပြင်ဆင်
နှစ်ပတ်လည်များအတွက် လက်တင်ဝေါဟာရများသည် ပထမဆုံး အနှစ်နှစ်ဆယ်(၁-၂၀)၊ သို့မဟုတ် ဆယ်နှစ်စီ(၃၀၊ ၄၀၊ ၆၀၊ ၇၀ စသဖြင့်)၊ သို့မဟုတ် နှစ်တစ်ရာစီ(၁၀၀၊ ၂၀၀၊ ၅၀၀)၊ သို့မဟုတ် နှစ် တစ်ထောင်စီ (၁၀၀၀၊ ၂၀၀၀၊ ၃၀၀၀ စသော) နှစ်ပတ်လည်များအတွက် တည့်တည့်ပင် မှည့်ခေါ်ထားသည်။) ဤသို့သော အခါမျိုးတွင် နှစ်တစ်နှစ်စီ၏ ကိန်းဂဏန်းအသီးသီးအတွက် လက်တင်စကားလုံးမှ ဆင်းသက်လာသည်။ သို့သော်၊ ရာစုနှစ် ကိန်းခွဲများနှင့် ဆက်စပ်သော နှစ်ပတ်လည်များ (ဥပမာ၊ ၁၂၅ နှစ်မြောက်၊ ၁၅၀၊ ၁၇၅၊ ၂၅၀ နှစ်မြောက်များ- ၁.၂၅၊ ၁.၅၊ ၁.၇၅၊ ၂.၅ ရာစုနှစ်ပတ်လည်များကို ဆိုလို) ကျင်းပလိုသောအခါ အမည်ပေးရန် အခြေအနေသည် ထင်သလောက် မလွယ်ချေ။
Roman fractions were based onaduodecimal system. From 1⁄12 to 8⁄12 they were expressed as multiples of twelfths (uncia "twelfth"; the source of the English words inch and ounce) and from 9⁄12 to 11⁄12 they were expressed as multiple twelfths less than the next whole unit—i.e.awhole unit less 3⁄12, 2⁄12 or 1⁄12 respectively. There were also special terms for quarter (quadrans), half (semis), and three-quarters (dodrans). Dodrans isaLatin contraction of de-quadrans which means "a whole unit lessaquarter" (de means "from"; quadrans means "quarter". Thus for the example of 175 years, the term isaquarter century less than the next whole (bi)century or 175 = (-25 + 200).
၁ နှစ် Annual စက္ကူ Paper
၂ နှစ် Biennial ဂွမ်း Cotton
၃ နှစ် Triennial သားရေ Leather
၄ နှစ် Quadrennial လိုင်နင် Linen
၅ နှစ် Quinquennial သစ်သား Wood
၆ နှစ် Sexennial သံ Iron
၇ နှစ် Septennial သိုးမွှေး Wool
၈ နှစ် Octennial ကြေး Bronze
၉ နှစ် Novennial ကြေးနီ Copper
၁၀ နှစ် Decennial သံဖြူ Tin/Aluminium
၁၁ နှစ် Undecennial သံမဏိ Steel
၁၂ နှစ် Duodecennial ပိုးသား Silk
၁၃ နှစ် Tredecennial ဇာ Lace
၁၄ နှစ် Quattuordecennial ဆင်စွယ် Ivory
၁၅ နှစ် Quindecennial သလင်း Crystal
နှစ် ၂၀ Vigintennial / Vicennial ကြွေ China/Porcelain
၂၅ နှစ် Quadranscentennial ငွေရတု Silver jubilee
နှစ် ၄၀ Quadragennial ပတ္တမြားရတု Ruby jubilee
နှစ် ၅၀ Semicentennial / Quinquagenary ရွှေရတု Golden jubilee
နှစ် ၆၀ Sexagennial / Sexagenary စိန်ရတု Diamond jubilee
၆၅ နှစ် နီလာရတု Sapphire jubilee
နှစ် ၇၀ Septuagennial ပလက်တီနမ်ရတု Platinum jubilee
နှစ် ၁၀၀ Centennial ရာပြည့် ရတု
၁၂၅ နှစ် Quasquicentennial Term is broken down as quasqui- (andaquarter) centennial (100 years). Quasqui isacontraction from quadrans "a quarter" plus the clitic conjunction -que "and". The term was coined by Funk and Wagnalls editor Robert L. Chapman in 1961.
နှစ် ၁၅၀ Sesquicentennial Nature Term broken down as sesqui- (one andahalf) centennial (100 years)
၁၇၅ နှစ် Dodransbicentennial - Dodrans isaLatin contraction of de-quadrans which means "a whole unit lessaquarter" (de means "from"; quadrans means "quarter"). 175 years isaquarter century less than the next whole (bi)century or 175 = (-25 + 200).
Demisemiseptcentennial Probably[ယူဆချက် လိုအပ်သည်]amodern coined term: demisemiseptcentennial; literally one-half (demi-) x one-half (semi-) x seven (sept-) x 100 years (centennial)—also demisemiseptcentenary.
Quartoseptcentennial Probably[ယူဆချက် လိုအပ်သည်]amodern coined term: quartoseptcentennial; literally one-quarter (quarto-) x seven (sept-) x 100 years (centennial)—also quartoseptcentenary.
Terquasquicentennial First used by Bell Laboratories in celebrating its 175th anniversary asacorporation.[ကိုးကားချက်လိုသည်] Isacoined word for an anniversary of 175 years, but the elements of the word literally refer to an anniversary of 375 years, as follows: ter- (3) × quasqui- (1¼) × centennial (100 years)
နှစ် ၂၀၀ Bicentennial Bicentenary
နှစ် ၂၅၀ Sestercentennial - To express 2½ in Latin it would be expressed as "half-three". The term relates to being halfway [from the second] to the third integer. In Latin this is "Sestertius" which isacontraction of semis (halfway) tertius (third)—hence Sestercentennial.
Semiquincentennial Probably[ယူဆချက် လိုအပ်သည်]amodern coined term: semi- (half) × quin (5) × centennial (100 years) = 250 years. Used by Brown University in 2015.
နှစ် ၃၀၀ Tercentenary / Tricentenary Tercentennial / Tricentennial
နှစ် ၃၅၀ Sesquarcentennial - A modern coined term; sesquarcentennial for 350 years is deduced here from the "Sestertius" definition for 250 years above. For 350 years it relates to being halfway from the third to the fourth integer; thusacontraction of semis (halfway) and quartus (fourth); hence Sesquarcentennial.
Semiseptcentennial Probably[ယူဆချက် လိုအပ်သည်]amodern coined term: semi- (half) × sept(7) × cen(t)- (100) × centennial (350 years)
နှစ် ၄၀၀ Quadricentennial Quadricentenary / Quatercentenary
နှစ် ၅၀၀ Quincentenary Quincentennial
နှစ် ၆၀၀ Sexcentenary Sex(a)centennial (?)
နှစ် ၇၀၀ Septcentennial Septuacentennial Probably[ယူဆချက် လိုအပ်သည်]acoined term; earliest known use in March 1988. Chiang Mai Septcentennial Stadium (Chiang Mai, Thailand) was completed in 1991.
နှစ် ၈၀၀ Octocentenary Octocentennial
နှစ် ၉၀၀ Nonacentennial
နှစ် ၁၀၀၀ Millennial
နှစ် ၁၅၀၀ Sesquimillennial Term broken down as sesqui- (one andahalf) millennial (1000 years)
နှစ် ၂၀၀၀ Bimillennial
နှစ်ပတ်လည်များတွင် အထူးအမည်များ ရှိသည်။ ၁၉၂၂ တွင် ထုတ်ဝေသော အင်မလီပို့စ်၏ စာအုပ်တွင် ၁၊ ၅၊ ၁၀၊ ၁၅၊ ၂၀၊ ၂၅၊ ၅၀ နှင့် ၇၅ မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့များအတွက် ပေးသင့်သော မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်လက်ဆောင်များကို အကြံပြုထားသည်။ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် လက်ဆောင်များ အကြံပြုချက်ကို နောက်ပိုင်း ထုတ်ဝေခြင်းများတွင် ထပ်မံ မွမ်းမံလာခဲ့ရာ၊ ယခုအခါ ရိုးရာပင် ဖြစ်နေလေပြီ။ ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောရလျှင်၊ နှစ်သက်တမ်း ကြာရှည်လာလေ၊ ယင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများသည် ပို၍ ကြာရှည်ခံရမည်၊ ပို၍ တန်ဖိုးရှိလာရမည် ဖြစ်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ SA 175th Jubilee။ Clipper Ship 'City of Adelaide'။7October 2011 တွင် 175th Jubilee မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ March 8, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “So the name fora175th anniversary? For now it is really up to the preference of the reader. One day one of these terms may make its way into popular usage, become accepted, and findaplace inadictionary.”
↑ Chapman, Robert L. (February 1965). "The History of "Quasquicentennial"". American Speech 40 (01): 53–57. doi:10.2307/454178. “It is our policy to reply as courteously and helpfully as we can to such requests, and I answered Mr. Hatten on August 7, suggesting quasquicentennial. Since this isahistory, I shall quote the letter in full: Dr. Wilfred Funk has passed your letter of July I on to us. We are happy to help, if you feel that you really wantanew Latinate word meaning "one hundred and twenty-fifth anniversary". The best model upon which to form the word is "sesquicentennial", meaning "one hundred and fiftieth anniversary". We needafirst element meaning "plusafourth", analogous with "sesqui" which means "plusahalf". "Sesqui" is apparently formed from "semis que", meaning "andahalf". Now, both "quarta" and "quadrans" mean "a fourth", so we may begin with either "quarta que" or "quadrans que". The trick is to combine and shorten one of these as "sesqui" was combined and shortened from "semis que". If we follow the model of "sesqui" very closely, retaining the stressed vowel and final "s" of "quadrans", we get the word "quasquicentennial". Combining and shortening in other ways we can also get "quadqui-", "quansqui-", "quarsqui-", and perhaps several others. On the grounds that it is closest to the model and also probably the least ugly of the set, I would choose "quasquicentennial" (pronounced kwahskwee-) as the new word. Of course, you may decide that you do not really want or needanew word. There is no point in proliferating them needlessly. I should add, perhaps, that this word would not appear in any of our dictionaries until it had established itself in wide currency, even if you should decide to use it. I hope we have been able to help you.”
↑ Missouri Secretary of State Local Records Inventory Database
↑ "Under the Cupola". Neighbors of Batavia, July / August 2008, p. 29. The etymology of "demisemiseptcentennial" is compared to "hemidemisemiquaver",a64th note.
↑ "Pickle Barrel: 175th-birthday bash planned for Dillsburg." The Patriot-News (Mechanicsburg, Penn.), Wednesday, 18 June 2008.
↑ "Under the Cupola". Neighbors of Batavia, July / August 2008, p. 29.
↑ Brown lowers the curtain on 15-month semiquincentenary။ Brown University (2015-06-11)။ 2015-06-11 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Meaning of the 250th။ Princeton University။ 12 July 2017 တွင် Princeton Alumni Weekly November 19, 1997 မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ March 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “Faster, it seems, than you can say "bicenquinquagenary", Princeton's 250th anniversary has come and gone.”
↑ A Memorial of the Celebration of the Two Hundred and Fiftieth Anniversary of the Settlement of the Town of Northampton, Massachusetts။ City of Northampton။ 27 January 2013 တွင် The Meadow City's Quarter-Millennial Book မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ March 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kersten, Glenn. "Naming the Anniversaries". Quidnunc [Suburban Library System, Burr Ridge, Ill.], March 1988.
↑ Architects 49: Selected and Current Work. (The Master Architect Series; 5.) Image Publishing Group, 2006. ISBN 978-1-876907-09-9
↑ 22. The Day of the Wedding. Post, Emily. 1922. Etiquette။ bartleby.com။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နှစ်ပတ်လည်&oldid=675194" မှ ရယူရန်
၂၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၂၃:၄၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၂၃:၄၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။